U-Eskom noMasipala uLundi bafike esivumelwaneni – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/U-Eskom noMasipala uLundi bafike esivumelwaneni
IMeya uWilson Mfana Ntshangase
SELUFIKE esiphethweni udaba obeluyinzukazikeyi lwesikweletu phakathi kukaMasipala wasoLundi, KwaZulu-Natal nenkampani ekhiqiza ugesi, u-Eskom njengoba sekuvunyelwene ukuba umkhandlu ukhokhe kancane kuze kuphele iminyaka emithathu.
Enkulumeni ekhethekile, iMeya yasoLundi uMnu uWilson Mfana Ntshangase, idalule ukuthi bebekweleta imali engaphezulu kwezigidi ezingama-R50.
Lesi sikweletu bekulokhu kunomdonsiwano ngaso umkhandlu wasoLundi usiphika uthi yiwo okweletwa u-Eskom noMnyango wezeMisebenzi yoMphakathi KwaZulu-Natal, oholwa uMnu uRavi Pillay.
“Empeleni isikweletu esidala lesi ebesiphakathi kukaMasipala wasoLundi no-Eskom kodwa sigcine sivumelana nabo ukuthi sizokhokha njalo ngenyanga kuze kuphele iminyaka emithathu. Lokhu kusho ukuthi inkinga kagesi asisezukuba nayo kangangoba nathi singuMkhandlu sizibekele imali engama-R21 million yenqalasizinda okuhlanganisa nokufakwa kukagesi kubantu bakithi,” kusho uNtshangase.
IBayede ikeyabika kakhulu ngesikweletu sikagesi ebesibhekene noMasipala wasoLundi nokuze kwaholela ekutheni kube nemihlangano eminingana lapho bekuzanywa ukuthola khona isixazululo sokuba ugesi ungacishwa.
Ngowezi-2016 u-Eskom unqumele uMasipala wasoLundi ugwayi katiki wathi uma wehluleka ukukhokha lesi sikweletu ezinsukwini ezili-14 luzobamnyama lonke uLundi.
Lokhu kwakusho ukuthi kuzovotwa ngomnyama ngokhetho loHulumeni Bezindawo njengoba izinsuku ezili-14 zazizofika ngaphambi kwalo.
UMasipala waseZululand wagcina usukhipha isibhongo ngokuthi ucishe zonke izakhiwo eziqondene noHulumeni wesifundazwe.
Lapha kwagcina kucishwe izindlu zikaHulumeni waKwaZulu Natal esezisingethwe uHulumeni obusayo njengamanje wesiFundazwe kuhlanganiswa nesiShayamthetho esidala.
UMasipala wawukhala ngokuthi ukweletwa imali eyizigidi ezingama-R30, uMnyango wezeMisebenzi yomPhakathi kodwa wona ubuphika uthi imali oyaziyo ayifike ngisho ezigidini ezinhlanu.
Okhulumela uMnyango wezeMisebenzi yoMphakathi, uMnu uMbulelo Baloyi wathi akulona iqiniso ukuthi bakweleta imali engaka kodwa inkinga ukuthi uMasipala usuhlanganise nenzalo kanye nemali yama-rates.
UMnyango ugcine usugijimela enkantolo enkulu uyovimba uMasipala ukuba uqhubeke nokucisha ugesi ezindlini zikaHulumeni okuyisiShayamthetho nalezo ezaziqondene nokusebenza kukaHulumeni omdala.
Ulundi belumi ngokuthi u-Eskom uzama ukuzenza amabhoklolo ngoba yiwo empeleni obakweleta izigidi ezingama-R78 kodwa usubeka kubo icala.
Kugcine sekuba nomhlangano obusemaHhovisi akwa-Eskom aseNew Germeny, eThekwini lapho kwakuyoxoxiswana khona.
ULundi luphinde lwagadla eMnyangweni kaMgcinimafa oholwa uNkk uBelinda Scott ngemuva kokuthi lo Mnyango wamemezela ukuthi uzotakula lo Masipala esikweletini sika-Eskom.
Ubuholi basoLundi bavuka umbhejazane buthi akukho lokhu okushiwo uMyango ngoba awukaze ubanikeze naleyo mali owawubethembise ukuthi uzobakhokhela yona kwa-Eskom.
Imiphumela yalesi sikweletu ikeyashaya kwezwela emphakathini wasoLundi ngonyaka owedlule lapho abantu bebengasazi ukuthi kufanele benzenjani ngenxa yokuhlala becishelwa ugesi.
Ngosuku lokhetho loHulumeni Bezindawo, obelungoNcwaba mhla zintathu kowezi-2016, ugesi wavele wanqamuka kusaqalwa uhlelo lokubalwa kwamavoti nokwadala umsindo omkhulu phakathi kwe-IFP ne-ANC besolana ngokuthi kukhona abafuna ukusebenzisa leli thuba lobumnyama ukukhwabanisa amavoti.
UMasipala wasoLundi akusiwona kuphela obubhekene nale ngwadla yesikweletu kodwa i-Free State ibinesikweletu esibalelwa ezigidini eziphindwe kabili (R2 billion) koMasipala bawo abathathu.
Kulabo Masipala kubalwa iNgwathe Local Municipality, Maluti-a-Phofung Local Municipality neDihlabeng Local Municipality.
Abanye oMasipala abebekweleta bebeseMpumalanga naseNorth West kanti bekukhona nengxenye yabathile eseGauteng.
KwaZulu-Natal kuze kwakhala uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu, uNkk uNomusa MaDube Ncube ekhononda ngokuthi kukhona osomabhizinisi abayinkinga abangafuni ukukhokha izikweletu zikagesi koMasipala yikho begcina sebenenkinga yokukhokha.
Uze waveza ukuthi sebezoqala uhlelo lokuthi labo abangawukhokheli ugesi bazobalandela ngohlelo lwabaqoqi bentela ukuze bakwazi ukubabamba ngoba balimaza ukusebenza komasipala ngokuthi bangawukhokheli ugesi.
Imeneja kaMasipala wasoLundi, uMnu uTozi Zulu, ithe le mali okuvunyelwene ngayo ukuthi ikhokhwe ngenyanga kuzoba isigidi esisodwa namakhulu amathathu (R1.3 million).
“Le mali engenhla yiyo esivumelene ngayo no-Eskom ukuthi siyikhokhe njalo ngenyanga kuze kuphele iminyaka emithathu. Ngaphandle kwalokho no-Eskom ubusikweleta kanti ugcine usikhokhele imali yethu eyizigidi ezingama-R64. Le mali ubesikweleta ngenxa yokuthi ngesikhathi ufakela umphakathi ugesi osezindaweni zamakhosi, ubusebenzisa izinsiza zethu. Ngisho uMnyango wezeMisebenzi yoMphakathi nawo ugcine usikhokhelile imali obusikweleta yona kanjalo nenkantolo kaMantshi yaseMashona, eMahlabathini nayo isikhokhile isikweletu sayo sikagesi ebisikweleta sona,” kusho uZulu.
Ubuye wakugcizelela ukuthi ugesi umba eqolo kakhulu kubo njengoMasipala ngoba ngenyanga u-Eskom ubafuna izigidi eziyisikhombisa ekubeni bona emphakathini baqoqa imadlana cishe eyizigidi ezintathu.
Uqhube wathi ingwadla abanayo eyokuthi ngisho u-Eskom angawenyusa kangakanani ugesi kodwa bona njengoMasipala abakwazi ukucindezela umphakathi ngokuthi benyuse kakhulu amanani nokugcina kulimaza bona.
Uthe ngenxa yalokhu sebethathe isinqumo sokuthi imali okufanele ihlinzeke izidingo zomphakathi bavele bayifake kugesi ukuze bakwazi ukumelana nomthamo wokusetshenziswa kwawo.
UZulu uthe okunye okuseyinkinga ukuthi bona bakhelwe imiphakathi enabantu abaningi abangasebenzi nokubaphoqa ukuthi imindeni eminingi bayinikeze ugesi mahhala.
Uveze ukuthi lokhu kugcina sekubalimaza ngokuthi abantu bawebe kungabonakali.